Umkhiqizi Nomhlinzeki Wothenga Amabhokisi WaseChina | Qiangzhong
Imvamisa kuyithangi eliyindilinga eliqonde mpo, elinamakhanda aphezulu avundlile ayisiyingi noma amakhanda aphezulu kovemvane, namakhanda ajwayelekile ovemvane aphansi noma amakhanda ezansi ayisiyingi. Kuyinto inguquko arc esigabeni ushintsho odongeni kwangaphakathi, akukho ezempilo amakhona efile, kulula ukuhlanza. Futhi kupholisha isibuko kodonga lwangaphakathi, ngokuya ngezidingo zezempilo. Ethangini ifakwe ezinyakazayo mechanical kanye nokwakheka womoya self-uvala umnyango slag.
Isihlungi somoya se-Aseptic, i-thermometer (uhlobo lwedijithali noma uhlobo lokudayela), igeji yengcindezi, ingilazi yokubona, imbobo yenhlanzeko, izimbobo zokungena kanye nezindawo zokuthengisa, ibhola le-CIP swivel yokuhlanza, i-valve yokuphepha, njll, noma elungiselelwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
● Amandla angama-500L ~ 5,000L, angenziwa ngezifiso njengoba kuceliwe.
● Isicabha se-slag esizilawula ngomoya asigcini nje ngokungabi nokuvuza, kodwa futhi siqinisekisa ukuthi umnyango we-slag ngeke uvuleke ngokuzenzakalela ngaphansi kokucinywa okungazelelwe noma ukumiswa. Kuphephile futhi kunokwethenjelwa ukusebenzisa.
● Nge-interface esheshayo ye-chuck, umzimba wangaphakathi wenziwe nge-SUS304 noma i-SUS316L insimbi engagqwali, ingaphakathi liyi-Ra≤0.28μm ～ 0.6μm eyenziwe ngezibuko. Ingaphezulu langaphandle lingapholishwa, libhulashiwe, lifakwe isanti noma abanye ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Kufanelekile ukukhishwa kwekhofi, njll.
UKUSUSA I-TYPE YEPADILE
Langaphambilini Sanitary Cam Rotor Pump QZ-Z
Olandelayo: I-JM-L Vertical Colloid Mill (ibanga lezempilo)
Esishisayo Ukuxuba Isitsha
Isitsha sebhizinisi lesitimu
Isikebhe Sokuphendula Ijacket
Isikebhe Sokuxuba Ijackethi
Isigaxa sokuxuba ithangi nge-viscosity con ephezulu ...
Electric Ukushisa cleaner ekhethekile emise kuhlangana t ...